मेरी पुलिस दिदी घाटामा सुरक्षा दिइरहेकी छे त्यो बेला सडकमा ड्युटी गर्दैगर्दा एउटा मोटरसाइकल दुर्घटना भएको रहेछ । मोटरसाइकलबाट लडेका दुई केटाहरूलाई दिदीले उठाएर अस्पताल पुर्‍याएकी रै'छ। ती केटाबाट पो सर्‍याे कि १९ वैशाख, २०७८ 11 min read Share
रावण आँपको रुखलाई थाहा छ, चैत वैशाख अप्ठ्यारा हुरीहरूको मौसम हो । तर पनि आँपको रुखले चैत वैशाखमै आफ्ना चिचिलाहरूलाई आफ्नो छातीमा झुण्ड्याउँछ । आँपका रुखहरूलाई थाहा छ, जो उसका सन्तान हैनन् । ती हुरीसँगै हराइजान्छन्, अनि जो उसका सन्तान हुन्, ती त हुरी गइसकेपछि पनि बाँचिरहन्छन् । पाकेको आँप जब भेट्नोबाट झर्छ, ऊ हारेर भुइँमा झरेको हैन, ऊ त हुरीलाई जितेको खबर, माटोलाई सुनाउन झरेको हो … १९ चैत, २०७७9min read Share
बिउ गोरु गाई कराउनु रोग हो ? के यो गोरु डाक्टर हो ? गोरुले उफ्रीउफ्री उपचार गरिरहेको हो ? साँच्चै गोरु डाक्टर केही बेर उफ्रिएपछि गाईको कराउने रोग च्वाट्टै निको हुन्छ त ! कहिलेकाहीँ गोरु उफ्रिरहन्छ तर बा खुसी हुँदैनन्, किन ? गोरु डाक्टरको सुई गतिलो परेन ? कि के भयो ? फुच्चे अल्मलिन्छ २१ पुस, २०७७ 10 min read Share